हिराको मूल्य पाँच मुठा साग « Nepal – the country of the Buddha and the Mt. Everest
@nareshadh977 @ksp176 👍 32 minutes ago
@Nabin62158820 @VidushiRana 👍 32 minutes ago
@KarkiSl @VidushiRana 👍 33 minutes ago
@DeepakG57179619 @VidushiRana 👍 33 minutes ago
@DhrubaNeupane17 @VidushiRana 👍 34 minutes ago
@funnfire @VidushiRana 👍 34 minutes ago
@BShrestha99 @VidushiRana 👍 35 minutes ago
@NeupanePrabina तिहार नजिकिदै गरेकोले होला यी सयपत्री हेर्दा मात्रै पनि मनै आनन्द आउने त छ नै सुगन्ध नै पनि आइरहेको… twitter.com/i/web/status/1… 44 minutes ago
« पत्रकारिताले धर्म छाडेपछि अनिस्ट निम्त्याउँछ
एउटै भाषणको लागि सर्बाधिक पारिश्रमिक डेढ मिलियन डलर »
Posted by Ram Kumar Shrestha on September 13, 2020
[मेरो फेसबुकमा प्रकाशित सामग्रीमध्येमा सर्बाधिक लोकप्रियमा दोश्रो स्थानमा रहेको सामग्री जुन समग्रमा लाखौंंका बीच पुग्यो ।]
एकदिन एकजना मानिस आफ्नो गुरुकहाँ गएर भन्यो, “गुरु म हजुरलाई आदर गर्छु, तर मेरा धेरै साथीहरुले हजुरलाई पागल भन्छन । मलाई आज हजुर पागल होइन भन्ने कुरा प्रमाणित गरिदिनु पर्‍यो” ।
गुरु कोठाभित्र पसेर एउटा टल्किएको बस्तु ल्याउनु भयो र आफ्नो चेलालाई दिंदै भन्नु भयो, “बाबु, यो ढुंगा लिएर तरकारी बजारमा जानु र कति मुठासम्म साग दिन्छ बुझेर आउनु, तर यस्लाई नबेच्नु ।”
सो ब्यक्ति तरकारी बजारमा गएर धेरैसंग सोध्यो कि सो ढुंगासंग साट्न पर्दा कति मुठा साग दिने भनेर । थोरैमा एक मुठा र बढीमा पाँच मुठा साग दिने जानकारी पाएपछि ऊ गुरुकहाँ गएर एकजनाले बढीमा पाँच मुठासम्म दिन मन्जुर भएको जानकारी दियो ।
गुरुले उन्लाई सुन पसलेहरुकहाँ गएर बढीमा कतिसम्म दिने रहेछ बुझ्न पठायो ।
उनी धेरै सुन पसलेकोमा गएर बुझ्दा बढीमा दश लाखसम्म दिने ब्यापारी भेटेपछि गुरुकोमा गएर दश लाखसम्म दिने पसले भेटिएकोले अब बेच्न ढिलाई नगरौं गुरु भनी आग्रह गर्‍यो ।
गुरुले उस्लाई नहतारिन भन्नु भयो र उस्लाई अब हिरा पसलेहरुकोमा गएर कतिसम्म दिन्छ बुझेर आउन भने ।
त्यो मान्छे अब धेरै हिरा पसलेकहाँ गएर आफ्नो गुरुले दिएको त्यो ढुंगालाई कति दिन्छ सोध्दै हिंड्यो । एउटा हिरा पसलेले त्यो ढुंगालाई एक करोडसम्म दिने कुरा बतायो । त्यो मान्छे अत्तालियो र हस्याङ र फस्याङ गर्दै गुरुकहाँ गएर एकजनाले एक करोड दिन तयार भएकोले अब भने बेच्न ढिलाई गर्न नहुने बतायो ।
गुरुले भन्नु भयो, “बाबु म सन्यासीलाई त्यो एक करोडको के काम?” गुरुले अगाडि भन्नु भयो, “यो ढुंगा र म उस्तै हो । साग पसलेले यस्लाई बढीमा पाँच मुठा साग दिन राजी भयो । किनकि उस्ले यो ढुंगाको मूल्य त्योभन्दा बढी देख्न सकेन । सुन पसलेले यस्को मूल्य दश लाखभन्दा बढी देख्न सकेन जबकि एउटा हिरा पसलेले यस्को मूल्य नाफा गरेर बेच्नको लागि एक करोडसम्म तिर्न तयार भयो । म पनि त्यस्तै हो – कसैले मलाई पागल भन्लान, कसैले सन्यासी भन्लान र अझ कसैले देवता । कुन मान्छेले मलाई कसरी बुज्छ भन्ने कुरा उस्को स्तरले बताउने कुरा हो । त्यसैले सबै आ-आफ्नो ठाउँमा ठीक छन । तिमीले कसरी लिने भन्ने कुरा तिम्रो कुरा हो बाबु ।”
Facebook published link
This entry was posted on September 13, 2020 at 8:13 am	and is filed under कथा/लघु कथा. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.